Funicular | RayHaber | Railway | Highway | telegrama fiara
Fitateram-bahoaka malalaka eto Istanbul amin'ny andron'ny Repoblika. 29 Oktobra Day 96. Nanomana ny hankalaza ny taona miaraka amin'ny lanonana mahafinaritra ny IMM, ny fitateram-bahoaka amin'ity fetim-pirenena ity dia nanapa-kevitra ny hanome serivisy malalaka. Fivoriambe monisipaly ao amin'ny Istanbul Metropolitan (IMM), raha ny hevitry ny filoha Ekrem Imamoglu [More ...]
Ny Kaominina Metropolitan Istanbul dia nanao atrikasa Rail Systems izay nomena ny fandraisana anjara malalaka avy amin'ny akademisiana ka ny solontenan'ny sehatra. Ny atrikasa dia nifantoka tamin'ny asa vita hatreto amin'ny rafi-pitaterana any Istanbul sy ireo fepetra tokony ho raisina aorian'izany. 2019 Rail Systems Workshop, Istanbul [More ...]
Ny faritry ny fitaterana fihenam-bidy dia natomboka tamin'ny fandraisana an-tanana ny filoha İBB Ekrem İmamoğlu. Nanapa-kevitra ny Filankevitra IMM fa hanararaotra ny karatra manga fihenam-bidy ho an'ireo mpianatra tsy afaka mipetraka amina departemanta iray amin'ny fanadinana oniversite sy ireo mpampianatra miasa amin'ny fifanarahana ao amin'ny minisiteran'ny fampianarana. Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) [More ...]
Tany Istanbul, akaikin'ny mpianatra 3 tapitrisa ary efa ho arivo ny mpampianatra 200 no nanao ny fanombohan'ny kilasy androany. Ao an-tanàna izay misy ny fitateram-bahoaka dia tsy andoavambola, omena ny serivisy serivisy hitondrana ny ray aman-dreny. Olom-pirenena, amin'ny fihainoana ny antson'ny filohan'ny IMM Ekrem İmamoğlu'nun [More ...]
Ny 9, manokatra sekoly, dia hanome serivisy fitateram-bahoaka malalaka any Istanbul amin'ny volana septambra ny alatsinainy eo anelanelan'ny 06: 00 - 14: ora 00. 2019-2020 Ny taom-pianarana 9 septambra 2019 dia manomboka ny alatsinainy. 16 dia akaiky ny 4 tapitrisa any Istanbul izay misy olona an-tapitrisany [More ...]
Ny masoivoho Metropolitan Istanbul (IMM) 2019-2020 Filohan'i Ekrem İmamoğlu nanazava ny fepetra noraisina tamin'ny taom-pianarana, ny fitateram-bahoaka dia hanome serivisy serivisy sy serivisy entan'ny fiara mitondra ny ray aman-dreny maniry ny andro voalohany, hoy izy. Manentana ny olom-pirenena hampiasa ny fitateram-bahoaka [More ...]
Fiomanana fifamoivoizana Istanbul amin'ny taom-pianarana vaovao
9, izay hanombohan'ny taom-pianarana vaovao any Istanbul, mba hialana amin'ny olan'ny fifamoivoizana amin'ny alatsinainy. Hiara-hiasa ny IMM, ny fiarovana ary ny zandarimaria mba hiantohana ny fivezivezena trafika. 06: 00-14: Ny fitateram-bahoaka eo anelanelan'ny ora 00 dia maimaim-poana maimaim-poana. fiara fitateram-bahoaka, [More ...]
Ny fitateram-bahoaka any Istanbul 30 maimaim-poana amin'ny Aogositra
30 Aogositra fankalazana ny andro fandresena, ny fiara fitateram-bahoaka any Istanbul dia mitondra mpandeha maimaim-poana. Araka ny filazan'ny Istanbul Metropolitan Municipality (IMM), ny fandresena lehibe 97. hetsika dia hotanterahina amin'ny toerana maro ao an-tanàna mba hankalazana ny taom-baovao raha mazoto. Asaina ny olona rehetra [More ...]
Ny mponin'i Istanbul dia maniry ny IETT sy Metro hiasa 24
Ny tsy fahampian'ny zotram-piaraman'ny IETT milaza fa 24 dia miasa mandritra ny ora maro ary ny hoe ny ankamaroany dia seranam-piaramanidina no nanangona fihetsika. Na dia tanàna velona aza i Megakent Istanbul amin'ny alina, tsy dia misy fifamoivoizana firy amin'ny alina. [More ...]
Bus Bay, Metro, Marmaray ve any Istanbul? Eid al-Adha Malalaka ve ny fitaterana olona 2019?
Ny fanapahan-kevitra noraisin'ny fivorian'ny kaominaly Istanbul Metropolitan noho ny tolo-kevitry ny filohan'ny Ekrem İmamoğlu dia hanome serivisy fitateram-bahoaka malalaka any Istanbul amin'ny andro fandresena sy ny andro fandresena amin'ny Aogositra 30. Ny IETT dia hikarakara sidina ho an'ny olom-pirenena ho tonga amin'ny toerana famonoana sorona IMM. Greater Istanbul [More ...]
Ny fitateram-bahoaka 30 any Istanbul amin'ny Aogositra sy Eid al-Adha Free
Ny monisipaly Metropolitan Istanbul, ny Eid al-Adha, ny Andro fandresena ny 30 aogositra ary hanokatra ny alatsinainy amin'ny volana septambra ny fiara fitateram-bahoaka 9 any Istanbul dia nanapa-kevitra ny hanome serivisy maimaim-poana. Filankevitra monisipaly ao Istanbul, notarihin'ny filohan'ny IMM Ekrem Imamoglu [More ...]
Ny halavan'ny lamasinina ao Istanbul dia hampitomboina ho an'ny milina 454
Raha eo am-pametrahana any Istanbul ny rafitry ny lalambe 221,7 kilometatra dia hahatratra ny 233,05 kilometatra misy ny halavan'ny rafitry ny lalamby ao an-tanàna miaraka amin'ny fizarana 454,75 kilometatra misy. Mba hampihenana ny fivezivezena ao Istanbul dia omena lanja ny rafi-lalamby. 233 ao an-tanàna tahaka ny anio [More ...]
Ny lalàna vaovao momba ny rafi-pitaterana an-tanàn-dehibe dia hanery ny monisipaly
Raha ny fiverimberenan'ny fahaverezan'ny AKP an'ireo kaominaly metropolitan dia mbola mitohy ihany ny fanapahankevitra nahariharin'ny kaominina. Miaraka amin'ny fitsipika vaovao, indrindra ao amin'ny monisipaly metropolitan dia tsy afaka manao asa saika. Raha ny vaovao noharinin'ny OdaTV, [More ...]
Noho ny fifanarahana nosoniavin'ny Minisitry ny Fahasalamana sy ny tanànan'i Metropolitana any Istanbul dia tsy maintsy voasoratra ao amin'ny Minisiteran'ny Fahasalamana ny kara-panondrom-behivavy "Disabled" sy ny "Accompanied Behindry". Eo ambanin'ny protocola nosoniavin'ny Minisitry ny Fahasalamana sy ny tanànan'i Metropolitana any Istanbul, [More ...]
Ho afaka amin'ny Jolay ny seranam-piaramanidina 15
15 3 tamin'ny fanonganam-panjakana tamin'ny volana jolay. Noho ny taona 2015, ny serivisy fitateram-bahoaka sy Başkentray ary Marmaray dia afaka maimaim-poana. Tamin'ny volana Jolay 15 2016 ny fikasana hanongam-panjakana nanatanteraka ny Filoha ny didy nivoaka tao amin'ny Gazety Ofisialy ny fanaovan-tsonia ny Filohan'ny Torkia Recep Tayyip Erdogan [More ...]
Ny asa dia tanterahana amin'ny lalaon'ny 17 hafa, anisan'izany ny metro, tram ary ny bisikileta manerana an'i Istanbul. Amin'io andalana io miaraka amin'ny totalin'ny kilometatra 221,7, ny 13 dia naorin'ny Metropolitan Istanbul sy ny 4 avy amin'ny Ministeran'ny Transports sy Infrastructure. [More ...]
6 toetran'ny tsenam-barotra miverimberina any Istanbul
Na dia eo aza ny fitomboan'ny vahoaka sy ny isan'ny fiara isan-taona any Istanbul, dia manamarina ny mpikaroka tsy miankina iraisam-pirenena fa ny fampiasam-bolan'ny Istanbul Metropolitan-tanàna amin'ny fiantohana sy ny vahaolana entin-tsaina dia mampihena ny lanjan'ny fifamoivoizana. Iray amin'ireo mpamatsy angona lehibe indrindra eran-tany [More ...]
Free Access Weekend amin'ny Istanbul! IETT nampiana fotoana fanampiny
Araka ny fanapahan-kevitra noraisina an-tsoratra amin'ny volavolan-dalan'ny antoko AK ao amin'ny Antenimieran'ny tanànan'i Istanbul, ny YKS dia hatao mandritra ny faran'ny herinandro ary ny fitateram-bahoaka dia afaka maimaim-poana amin'ireo mpandinika. IETT 180 amin'ny fametrahana fitsangantsanganana fanampiny mandritra ny roa andro [More ...]
Fitateram-bahoaka ho an'ny mpianatra hiditra ao amin'ny LGS ao Istanbul Free!
Fitateram-bahoaka rehetra tao Istanbul Metropolitan Monisipaly ao anatin'ny IMM Assemblée ny antoko AK Group ilay soso-kevitr'i eo amin'ny filan-kevitra mpikambana ao amin'ny firaisan-kevitry araka ny fanapahan-kevitra amin'ny alalan'ny rahampitso High School in Tetezamita Exam (LGS) dia hanome tolotra maimaim-poana ho an'ny mpianatra no hiditra. Tanànan'ny tanànan'i Istanbul [More ...]